Mgbasa ozi "Bido ihe Ọhụrụ" laghachiri Apple | Esi m mac
Maka Apple, Mgbasa Ekeresimesi na-abịa na njedebe ma mgbe abalị nke Santa Claus dị obere ntakịrị ịkọ ọkọ na mba ebe Ndị Amamihe Atọ ahụ na Jenụwarị XNUMX nwere obere ihe ha ga-eme. Ọ bụ ya mere na mba ụfọdụ ihe oyiyi na-amalite ịhụ nke ihe bụ Ọ ga-abụ mkpọsa mgbasa ozi ọhụrụ nke ndị Cupertino chọrọ ịmalite iji bulie ahịa.
Na nke a, ọ bụghị mkpọsa ọhụụ ọ bụla na ọ bụ na n'oge ọzọ anyị nwere ihe akpọrọ «Bido Ihe Ọhụrụ»Na-arụsi ọrụ ike na mba anyị. Ọ bụ maka ịmaliteghachi mkpọsa mgbasa ozi na n'oge ahụ gosipụtara ihe ndị enwere ike ịme ngwaahịa Apple site na ọrụ ụfọdụ ndị omenkà ama ama na mba ndị ahụ.
Nke bụ eziokwu bụ na anyị nwere ike ịhụla na Applelọ Ahịa Apple nke mba ndị dị ka Vietnam, India, New Zealand, Australia na South Korea nlọghachi nke mkpọsa anyị na-ekwu maka ya. Dịka ị pụrụ ịhụ n'ihe onyonyo anyị jikọtara, emeela ọhụụ ka ọhụụ dị ọhụụ mana echiche ahụ bụ otu na nke gara aga.
Anyị ji n'aka na mgbanwe a ga-eji nwayọ ruo mba ndị ọzọ yana United States na Europe n'onwe ya. O doro anya na mgbanwe ndị a ga-ewere ọnọdụ n'ime izu ole na ole Nke a bụ mgbe Ekeresimesi ekeresimesi.
Mgbe ị banyere weebụsaịtị anyị na-ekwu maka ya, ị ga - enwe ike ịlele veranda nke ọrụ nka nke ejiri kọwaa Apple ngwaahịa gị, ọ bụrụ iPhone 6s, iPad Pro ma ọ bụ Apple Watch n'onwe ya, n'etiti ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Mgbasa ozi "Bido ihe Ọhụrụ" na-alaghachi na Apple
Apple na - akwalite udi "New na Mac App Store"